Pokémon GO mutambi kurwa kuri kuuya munguva pfupi | IPhone nhau
Iko kwekutanga, hunyanzvi uye kuita kwakasiyana kwevagadziri kwakakosha kuti ubudirire muApp Store nhasi. Mitambo mikuru sePokémon GO yakaputsa mitemo nekupinza pfungwa idzo dzaitozivikanwa, nenzira yatisati tamboona. Kubva ipapo zvichienda mberi, mazana emapurogiramu nemitambo zvinoshandisa iyo augmented reality seumwezve rubatsiro kuti mitambo yako ive yakasarudzika.
Niantic yakazivisa kuburikidza neayo Twitter account kuti Pokémon GO mutambi kurwa vachasvika munguva pfupi. Muzhizha isu takanga tavimbiswa kare kuti iyo PVP modhi yemutambo unozivikanwa yaizosvika gore risati rapera. Uye zviri pachena tichazviona munguva pfupi iri kutevera. Kunyangwe isu tichiri kusaziva ruzivo, ivo vakatiita kuti tione chimwe chinhu kupfuura ongororo yakapusa.
Ipo uine Pokémon ine yakawanda yeCP ingaite senge mukana wakakura muhondo dzeMaster League, Varairidzi vanofanirwa kufunga zvine hungwaru pavanenge vachirwira mumakundano eGreat uye Ultra, uko kune chaiyo mipimo yeCP. pic.twitter.com/LYl3BfhyG7
- Pokémon GO Spain (@PokemonGOespana) November 30 we2018
Pokémon GO PVP modhi iri kuuya munguva pfupi
ari Mudzidzisi Hondo, Aya ndomaitiro avakazvidaidza, ivo vachakurumidza kusvika kune iyo Pokémon GO kunyorera. Izvo ndezvekuwedzera maringe nemodi kune mumwe weanonyanya kushandiswa mitambo yenguva yacho. Nenzira iyi, kwete chete kuti isu tinogona kurwa pakati pezvikwata kuhwina gyms, asi isu tinogona kurwa nemunhu mumwe nemumwe uye kukwira ligi. Kunyangwe pasina ruzivo rwakawanda, isu tinoziva izvozvo munguva pfupi ichauya kune maapp. Pamusoro pezvo, tinovimba kuti kuzadzikiswa kwechinhu chitsva ichi kuchave pamberi peKisimusi sezvakavimbiswa muzhizha.
Kana tichigadzira iyo Yekudzidzisa Hondo, chinangwa chedu chaive chekugadzira chiitiko icho munhu wese anogona kunakidzwa uye nekuona kuti dzakasiyana mhando dzePokémon dzakakwanisa kuratidza kugona kwavo. Nekuunza maLeigi kuCoach Matches, isu tinotarisira kuumba sisitimu inowanikwa kune mazhinji ma Coach.
Yekudzidzisa Hondo dzichashanda kuburikidza Hondo Yenyika. Pachave nemakwikwi matatu ekurwa. Mune yega yega, pachave necp kukamurwa kweimwe Pokémon yekudzivirira murairidzi ane yakaderera kukosha Pokémon kubva mukukwanisa kurwisa mumwe mutambi wepamusoro CP Pokémon. Aya matatu marigi angave:
Great League: 1500 CP muganho paPokémon
Ultra League: 2500 CP muganho paPokémon
Maste League: hapana CP muganho wePokémon yega yega
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Pokémon GO mutambi kurwa kuri kuuya munguva pfupi
Google inovandudza nhare yayo yeGoogle Fi uye inoita kuti ienderane neiyo iPhone